Ayax saameyn ku yeeshay beeraleyda gobolka Maroodijeex, Somaliland - Radio Ergo
Maro kaneeco beerta looga badbaadinayo ayaxa/Kaydka Sawirada Ergo
(ERGO) – Labo isbuuc ka hor inta uusan beertiisa goosan, Cabduqaadir Maxamed Cali waxaa basal iyo ansalaato (saladh) u baxayay, saddexdii bilood ee la soo dhaafay, uga dagay ayax gebi ahaanba baabi’yay.
Cabduqaadir oo ay beertiisu ku taallo tuulada Caro-yaambo oo 30 km galbeed uga beegan Hargeysa ayaa sheegay in nolosha qoyskiisa oo uu ka maareyn jiray beerta ay hadda culeys la soo deristay.
“Basashaasi waxay ahayd abqaal, meeshii oo dhan dhul bannaan ayuu ka dhigay,” ayuu yiri Cabdiqaadir.
Ninkaan ayaa tilmaamay in dalagga uu ayaxu ka cunay uu ku beeray $510 oo $200 ay dayn aheyd. Wuxuu xusay in uu qorshihiisa uu ahaa in daynta uu iska bixiyo marka uu suuqa geeyo wax-soo-saarka.
Cabduqaadir oo ah aabbaha lix carruur ah ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in ayaxaan uu ka duwan yahay kuwii hore marka loo eego badnaanshaha iyo xiliyada dhowdhow ee uu soo laabanayo.
“Haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto halisteeda [ayay leedahay], dadka oo dhan wuu cidhib beelayaa. Baqdinta na haysa ayaa noogu wayn oo nin walba wixiisii uu haystay ayuu la baqanayaa,” ayuu yiri.
Wuxuu xusay in ayaxa u sidoo kale uga habsaday beerta bishii Abriil ee sanadkaan, waqtigaas oo uu isu-diyaarinayay in uu goosto.
Diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah ayaa ayaxa ka buufinayay deegaanka uu joogo Cabduqaadir.
Ayaxa ayaa sidoo kale nin kale oo beeraley ah oo lagu magcaabo Abaadir Maxamed Cabdullaahi uga habsaday toddobaatan geed oo liin-dhanaan ah, kuwaas oo uu ku beeranayay tuulada Xumbewayne oo 35 km bari ka xigta magaalada Hargeysa.
Abaadir ayaa sheegay in cabsida uu ka qabo ayaxa ay ku qasabtay inuu iska dhaafo abuurista khudhaarta oo uu beddelkeeda beerto basal, yaanyo, saladh, basbaas, liin iyo xabxab.
“Ilaahay ayaa awooddiisa noogu soo diray waxba kama karno oo waa imtixaan … Qof walba telefoon ayuu dhegta haystaa oo wuxuu baqdin ka qabnaa halka uu soo maraayo, prepaid-ka [lacagta karaka ku hadalka] nagaga baxay beertaba kama soo baxo runtii,” ayuu yiri.
Ayaxa ayaa ku degay ku dhowaad 250 beer, kuwaas oo intooda badan ku yaalla gobolka Maroodijeex, gaar ahaan tulooyinka Jaleelo, Daarasalaam, Horuhaadlay, Xumbeweyne, Biyo-shiinaha, Huluuq, Biyo macaan, Gogol-wanaag iyo Carro-yaambo.